Jin Yan Kiwifruit -China Yixinhe Ukuhweba
Actinidia ssp kuyinto uhlobo lwe of Actinidia Lindl, esesikhundleni 66 zezintaka kiwifruit futhi 62 zinhlobo China. "Pujiang ikiwi" indawo izinkomba lokuhweba, okuyinto izimpawu kakhulu Pujiang. Pujiang County, eSifundazweni Sichuan, elise-latitude 30 degrees enyakatho nenkabazwe, izwe neyaziwayo ikiwi okungcono zokutshala ndawo, izimo kakhulu emvelweni, ezihlukahlukene ocebile imithombo, base emakethe muhle. ESifundazweni Sichuan, njengoba omunye zasendle izikhungo ikiwi ukusatshalaliswa eChina, kuyinto t ...
Actinidia ssp kuyinto uhlobo lwe of Actinidia Lindl, esesikhundleni 66 zezintaka kiwifruit futhi 62 zinhlobo China. "Pujiang ikiwi" indawo izinkomba lokuhweba, okuyinto izimpawu kakhulu Pujiang. Pujiang County, eSifundazweni Sichuan, elise-latitude 30 degrees enyakatho nenkabazwe, izwe neyaziwayo ikiwi okungcono zokutshala ndawo, izimo kakhulu emvelweni, ezihlukahlukene ocebile imithombo, base emakethe muhle.
ESifundazweni Sichuan, njengoba omunye zasendle izikhungo ikiwi ukusatshalaliswa eChina, yisona sifundazwe luningi kakhulu ikiwi zasendle germplasm izinsiza kanye izinqolobane. Imiphumela yabonisa ukuthi kwakukhona 25 zinhlobo (kuhlanganise ezahlukeneyo futhi ezahlukeneyo) ka Actinidia eSifundazweni Sichuan.
Pujiang County itholakala emaphethelweni eningizimu-ntshonalanga ye-Chengdu Plain, phakathi 103 degrees longitude empumalanga imizuzu 103 ukuba 41 degrees imizuzu 41, i-latitude-degree angu-30 imizuzu emi-5 kuya degree 30 amaminithi 21. Izinto kuze kufinyelele 37 km ubude, nasenyakatho, naseningizimu le yasakazwa 27.5 km, nge endaweni ingqikithi 582,86 amakhilomitha square. Ngo-2005, esifundeni sabantu abantu 2575, abayizigidi ezingu-22,37 mu ka umhlabathi olimekayo. Pujiang County, isilinganiso lokushisa wonyaka we 16.3 ℃, Pingba, amagquma, entabeni ephethe sezwe, ehlobo kancane kancane mfushane, ubusika ukwanda kancane kancane; sifinyelela engezansi ezimbili emfuleni Shou'an indawo isikhathi eside endaweni ehlobo, Changqiu entabeni endaweni ebusika omude kunayo yonke. Ukushisa okuvamile kuba phakathi 17,9 futhi 18.2 ℃, okuyinto ngaphezu kwezinga lokushisa lendawo yonyaka isilinganiso 1.6 ~ 1.9 ℃. Ukushisa okuvamile kuba phakathi 17,9 futhi 18.2 ℃, futhi izinga lokushisa isilinganiso ngonyaka 1.6 ~ 1.9 ℃. I-annual Imvula yansuku zonke-85%, ngaphandle aphansi ngoMeyi 79%, izinyanga ezisele zingaphezu 80%, ikakhulukazi eningizimu-ntshonalanga ne-mpumalanga emoyeni.
Kiwi has eliphezulu a umsoco, uvithamini C Okuqukethwe kuphezulu, eyaziwa ngokuthi "inkosi izithelo ', ukubaluleka kwezomnotho kuphezulu kakhulu. Ngo-October 27, 2010, i-International Kiwi Peaks Summit wawuba ngasekuqaleni Pujiang County, Chengdu. Emcimbini wokuvula, "Pujiang ikiwi" ngokusemthethweni etholwe imikhiqizo kazwelonke ezindawo Ukuvikelwa okubonisa ukuthi. Pujiang County ungomunye ezintathu ngobukhulu ophuzi ikiwi ikiwi ipulazi emhlabeni, Pujiang County, sezulu esipholile, imvula obuningi, umhlabathi ovundile yaziwa njengenye best kiwifruit efanelekayo ukutshalwa endaweni, kuyinto ikiwi kazwelonke ukuboniswa zilandele izilinganiso ezithile endaweni, izinga ukuthekelisa ikiwi nokuphepha ukuboniswa ndawo, Ingabe emhlabeni ezintathu ophuzi ikiwi kiwifruit ukutshalwa omunye abomvu emhlabeni ezingavamile, ophuzi, oluhlaza okotshani "emithathu umbala ndawonye" umsuka ikiwi. 2010 "Pujiang ikiwi" ngezithelo umumo omuhle, iphunga ocebile, ukunambitheka amnandi futhi omuncu, ukunambitheka esiyingqayizivele, izici enothe zihlonzwe njengoba imikhiqizo kazwelonke Ukuvikelwa izinkomba ezindawo, ngo-2011 ibhaliswe ngempumelelo izinkomba ezindawo isitifiketi uphawu. Pujiang abazalwane abathathu Pujiang ikiwi zelamani ezintathu, libhekisela Pujiang ikiwi izithelo izithelo yellow, izithelo oluhlaza, amantongomane obomvu, bacebile e Victoria C, eyaziwa ngokuthi "iNkosi Victoria C".
"Pujiang imodeli" kuyinto Pujiang ekuqiniseni ikhwalithi kanye nokuphepha wezolimo imikhiqizo yokuphepha kweso, futhi ukukhuthaza ekutfutfukisweni kwetimboni, ukuthuthukiswa okugcinekayo ezintsha umkhuba imodeli, yisona inhlanganisela isimo County ngokuhambisana nezimo zendawo, ukusebenza kanzima kakhulu ezifezwayo kubonakala . umkhuba Pujiang ezintsha iye ezigqanyisiwe. Uhulumeni-led, nokuxhumanisa kweminyango, ikiwi "ulimi ukuphepha" ukufeza kokuqondisa egcwele.
Ukusungulwa umsebenzi ukukhuthazwa iqembu, uhlelo target umthwalo futhi uhlelo nokuziphendulela, lo mshini Ukuvikelwa utshalomali, kulawula ngempumelelo ikiwi isitshalo ukutshala, ukucubungula, kwegazi, ukusetshenziswa nakwezolimo emakethe ukuze, ukufeza umsebenzi zokulawula kusukela yokwenziwa nokuphathwa evamile futhi umthombo ukuphathwa eshintsha i okuholela isenzo kazwelonke, ikiwi "ukukhiqizwa ejwayelekile" kuzuzwe ijubane enobunye.
Ethembele izinzuzo ukusatshalaliswa Lenovo yomhlaba, ukusungulwa "esihlanganisiwe brand ukugunyazwa, bemunye amazinga wezolimo, bemunye ukunikezela wezolimo, bemunye ukulawula wonke umkhiqizo, underwriting obumbene, usizo obumbene ngezimali" "eziyisithupha esihlanganisiwe" uchungechunge zokutshala mode, nika play okugcwele County Oholela amabhizinisi, izinhlangano, indima inhlangano, ngempumelelo ekuqinisekiseni Pujiang ikiwi izinga eliyingqayizivele futhi ikhwalithi kanye nokuphepha.
Market ngamakhasimende, brand-led, ikiwi "ezintathu lwekuchumana" ukufeza ukukhiqizwa futhi yokuthengisa iyachuma. Pujiang ngokusebenzisa ukuqaliswa kwe "amazinga ukukhiqizwa, imikhiqizo kunezimpawu, ukuhlolwa izinga, izinqubo isitifiketi, kokuqondisa emakethe," yonke inqubo zokukhiqiza zifane, ikiwi izithelo isilinganiso, izithelo ezinhle kakhulu ngesilinganiso 95%, 90% noma ngaphezulu, ngokusebenzisa kazwelonke izinga ukuhlolwa General Administration "ukuthekelisa ukuboniswa base" ukwamukelwa, ikiwi izithelo ithengiswe eYurophu, e-Russia, emazweni angaphezu kuka-20 kanye nezifunda. Ngo-2014, esifundeni ikiwi okukhipha isamba semali eyizigidi eziyi 39,78 kg, ukwanda kokungabi kwezigidi ezingu 964 khilogremu, ukubaluleka okukhipha eziyizigidi ezingu-478,2 yuan, ukwanda kokungabi kwezigidi ezingu 28,62 yuan; Industrial agglomeration, ukuthuthukisa ukusebenza kahle, ikiwi "iphuzu inhlabathi ku igolide."
Pujiang uyakhile omkhulu futhi eziphambili kakhulu kiwifruit iphakeji isitoreji isikhungo, kuyinto ukuze kusheshiswe ukwakhiwa endaweni ezingaphezu kuka-300 esingamahektare ikiwi izithelo wholesale emakethe; eyakhelwe ikiwi fresh umtapo air conditioning 43, amandla ingqikithi amathani 40,000, kulawula ngempumelelo Supply ikiwi izithelo emakethe; ukwethulwa ukumaketha kanye processing amabhizinisi engaphezu kwengu-20, Pujiang ikiwi amaqoqo ezimboni kancane kancane kwakhiwa.
Eminyakeni yamuva, Pujiang County emhlabeni "ukwakha namazinga omhlaba organic base ezolimo" umgomo wokuqala kuleli zwe ukukhuthaza ukwakhiwa jikelele organic ezolimo County 'ukwakha izinhlelo ezinhlanu "njengoba intuthuko, ngamandla ukuthuthukisa eliphezulu ikiwi, itiye, ezisawolintshi, ukuze sihlakulele futhi andise amabhizinisi ehola, inhlangano, njengomkhaya epulazini lakubo "ezintathu eziyinhloko", Leveraging izinhlobo, izinga, brand "imikhiqizo ezintathu ukuthuthukisa", ukugcwaliseka ngemphumelelo kwemboni wezolimo ekutheni isibalo ukunwetshwa ukuthuthukisa ikhwalithi ukuguqulwa kanye nokulungisa, aphume entsha esiyingqayizivele Pujiang izici endleleni yesimanje ezolimo emisha kanye kabusha nentuthuko.
Olandelayo: Green Heart Kiwi Izithelo
China Kiwi Izithelo
Fresh Kiwi Izithelo
Jin Yan Kiwifruit Umthumeli
Jin Yan Kiwifruit elithengisa
Kiwi Izithelo Inani
Inani Of Kiwi Izithelo
kuphi Thenga Kiwi
Green Heart Kiwi Izithelo